Fiparitahana fitaovam-piadiana: basy mahery vaika miisa 2 129 nopotehina imasom-bahoaka | NewsMada
Par Taratra sur 03/12/2020
Niparitaka be tokoa ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Amin’ireo basy tsy ara-dalàna anarivony maro niparitaka sy nampiasain’ny mpanao ratsy manerana ny Nosy, 2 129 ny tratra tao amin’ny faritanin’i Fianarantsoa. Ny 1 657 amin’ireo, sarona tao amin’ny faritra Matsiatra Ambony, ka nopotehina imasom-bahoaka, omaly.
Tsy mahagaga raha mirongatra ny tsy fandriampahalemana, hay izao ny fitaovam-piadiana tany am-pelatanan’ny dahalo. Na eo aza anefa izany, nisy ny ezaka nataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fanentanana ny olona hamerina ireny fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ireny. Taorian’ireo fitaovam-piadiana nopotehina teny amin’ny Capsat, notontosaina tany amin’ny faritra Matsiatra Ambony koa ny fanapotehana ireo basy tsy ara-dalàna tratra tany amin’iny faritra iny. Amin’ireo basy anarivony maro azo manerana ny Nosy, basy miisa 2 129 azo tao anatin’ny faritanin’i Fianarantsoa ka 1 657 (nahitana basim-borona sy basy vita tanana ary basy Kalachnikov) amin’izy ireo, azo tao amin’ny faritra Matsiatra Ambony, lohalaharana tamin’ny fahazoana basy tsy manara-dalàna. Nopotehina teo imasom-bahoaka sy ireo tompon’andraiki-panjakana ambony eo anivon’ny faritra izany, natrehin’ny kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena (ComGN), ny governora. “Misy amin’ireo basy Kalachnikov tratra ireo no mbola azo ampiasaina tsara rehefa natao fanandramana. Hozaraina amin’ireo tobin’ny zandary any amin’ireo faritra mena izany. Ny ambiny kosa, mila amboarina”, hoy ny ComGN. Taorian’ny fidinana ifotony nataon’ny praiminisitra sy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, nisy ny paikady napetraka, notarihin’ny governora miaraka amin’ny OMC, ny depiote ary ireo ben’ny Tanàna sy ny vondrom-bahoaka eny ifotony amin’ny fametrahana fandriampahalemana maharitra ka izao nahitam-bokany izao izany.
“Tsy hijanona ny fanentanana…”, hoy ny ComGN
Nanamafy ny ComGN, ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa, fa dingana iray no vita ary asa lavitra ezaka ny hitazonana ny fandriampahalemana maharitra. “Tsy hijanona ny fanentanana ho amin’ny famerenana an-tsitrapo basy ataon’ny eo anivon’ny faritra”, hoy izy. Efa eo am-pametrahana ihany koa ny fikambanana Soa Miray Dia isaky ny distrika hiara-hiasa amin’ny mpitandro filaminana. Mifanindran-dalana amin’izany koa ny asa fampandrian-tany ataon’ny mpitandro filaminana, ny fametrahana tobi-miaramila, kaompanian’ny Zandarimaria ary kaomisarian’ny Polisy. “Tanjona ny hiainan’ny vahoaka ao anatin’ny fiarahamonina milamina hisian’ny fampandrosoana maharitra”, hoy hatrany ny fanazavany.
J.C sy H.H